1.5m Milentika notsofina lamba milina, Pp Spunbond Nonwoven Machine - Meiben
Hebei Meiben Technology Co., Ltd.dia miorina ao amin'ny Distrikan'i Xiong'an Vaovao any afovoan'i Beijing-Tianjin-Hebei miaraka amin'ny tontolo tsara tarehy sy fitaterana mety. Ny orinasanay dia manana sangany matihanina, avo lenta, ary miorina amin'ny kalitao, fanatsarana hatrany, ary mpisava lalana famolavolana vokatra. , Ary ekipa serivisy varotra sy varotra matanjaka aorian'ny varotra izay manenjika ny mpanjifa aloha.
Niorina tamin'ny 2012
10 taona niainana
Fanondranana any amin'ny firenena maherin'ny 100
Tsipika famokarana tsy tenona
Tsipika famokarana tsy tenona Spunbond
Surgica SMS tsara indrindra ...
Akanjo fandidiana SMS vidiana tsara indrindra SMS milina tsy tenona vita amin'ny lamba faran'izay avo lenta PP Spunbond lamba tsy vita tenona famokarana Lin Ny toetra mampiavaka ny lamba ara-pitsaboana sy ara-pahasalamana 1. Maivana: ny resina polypropylene dia ampiasaina ho akora fototra ho an'ny famokarana, miaraka amina gravité 0.9 monja, izay dia ny ampahadimin'ny landihazo ihany. Mivonto izy ary mahatsapa tsara; 2. Fahalemem-panahy: izy io dia vita amin'ny kofehy manify (2-3D) ary miforona amin'ny alàlan'ny fatorana mafana-malefaka. Ny vokatra vita dia maoderina malefaka ...
SMS PP Meloka notsofina Nonw ...
Ny fizotry ny famokarana lamba tsy tenona 1. Fibre kardy 2. Fibre ho tranokala 3. Fanamafisana ny harato fibra 4. Ataovy ny fitsaboana hafanana 5. Farany, famaranana sy fanodinana Ao amin'ny indostrian'ny filàna ilaina isan'andro, dia azo ampiasaina ho toy ny lamba firakofana fitaovana, ambainy, fitaovana fandravahana amin'ny rindrina, lambam-baravarana, kitapo fitsangatsanganana, sns. Amin'ny vokatra ara-pitsaboana sy ara-pahasalamana dia azo ampiasaina amin'ny famokarana akanjo fandidiana, akanjo ho an'ny marary, sarontava, fehikibo fidiovana, sns lamba tsy vita amin'ny lamba tsy vita vita modely andalana ...
Ny mampiavaka ny lamba ara-pitsaboana sy ara-pahasalamana 1. Maivana: ny resina polypropylene dia ampiasaina ho akora fototra ho an'ny famokarana, miaraka amin'ny hery mitokana 0,9 monja, izay telo ampahadimin'ny landihazo ihany. Mivonto izy ary mahatsapa tsara; 2. Fahalemem-panahy: izy io dia vita amin'ny kofehy manify (2-3D) ary miforona amin'ny alàlan'ny fatorana mafana-malefaka. Ny vokatra vita dia malefaka sy milamina ihany; 3. Mpandroaka rano sy mifoka rivotra: ny sifotra polypropylene dia tsy mandray rano, manana atiny hamandoana aotra ...
Spunmelt fitambarana non ...
Andalana famokarana tsy vita tenona meltblown Tombony fitaovana tsy tenona 1. Ny fikorianan'ny fitaovana tsy vita tenona iray manontolo dia afaka mandeha ho azy tanteraka, ary olona 1 ~ 2 ihany no ilaina hiasa, izay afaka mamonjy asa voafetra. 2. Ireo fitaovana vita amin'ny lamba tsy tenona dia afaka manitsy ny hafainganan'ny famokarana sy ny haben'ny vokatra ao anatin'ny faritra. Ny fitaovana lamba tsy tenona dia mampiasa fiasan'ny efijery mikasika, miaraka amin'ny halavany maharitra, fanarahana ny photoelectric, fanisana mandeha ho azy ary famonoana ho azy, sns. 3. Ao ...
Drafitra famokarana lamba tsy tenona tsy voafaritra voafaritra SS (Prodnct sakan'ny) 1600mm 2400mm 3200mm Fitaovana 29x13x10m 30x14x10m 32x15x10m Hafainganana 350m / min 350m / min 30m / min Gram Lanja 10-150g / m2 10-150g / m2 10-150g / Fanomezana m2 (Vokatra arakaraka ny 20g / M2) 9-10T / Andro 13-14T / Andro 18-19T / Andro FAHALALAHANA MAHALALAHANA GSM FIVORIANA FAMARIHANA AN-TAO AN-DALANA S 1600MM 8-200 1500T Diamondra, boribory, hazofijaliana S 2400MM 8- 200 2400T Diamond, boribory, hazo fijaliana ary tsipika S 3200MM ...
Singa roa lehibe amin'ny tsipika famokarana tsy tenona spunbond
Amin'izao fotoana izao, ny fampiasana lamba tsy misy tenona mifamatotra mifatotra dia mbola mahazatra ihany. Ho fanampin'ireo akanjo fanaontsika matetika, dia takiana amin'ny saron-tava malaza ihany koa ireo lamba tsy voatenona namboarina. Ny tsena goavambe ho an'ny lamba tsy tenona spunbond dia manome ny lamba spunbond tsy tenona amin'izao fotoana izao ...
Vokatra maro no mampiasa lamba tsy tenona, toy ny diapers ampiasain'ny ankizy, ary vokatra vita amin'ny lamba toy ny sarontava. Betsaka ny tombony azo avy amin'ny lamba tsy tenona. Izy io dia manana permeability rivotra madio sy fiasan'ny rano tsara. Noho izany, ny lamba tsy tenona dia ampiasaina amin'ny saha midadasika. Na izany aza, bec ...